Kadib 200 Dhimash Ah Ururka Xisbullaah Oo Xabad Joojin Uga Dhawaaqay Wadanka Suuriya.
Thursday July 27, 2017 - 10:36:25 in Wararka by Super Admin
Kadib dagaallo sanka dhulka loogu jiiday ayuu Ugu dambeyn Xisbiga iiraan ee wadamada Lubnaan iyo Suuriya ku dhawaaqay Xabad joojin buuxda oo uu la gelayo xoogaga Jihaadiga ah ee ka dagaallamaya dhulka Shaam.
War Rasmi ah oo kasoo baxay Ururka Xisbullaah isku magacaabay ayuu ku sheegay in uu diyaar u yahay Xabad joojin uu lagalo xoogaga islaamiga ah ee ka dagaallamaya gobolka Al-qalamuun ee kulaala soohdin beenaadka ay wadaagaan Lubnaan iyo Suuriya.
Bayaan kasoo baxay Ururka Xisbullaah ayuu ku caddeeyay mowqifkiisa ku aaddan Xabad joojin ka dhaqan gashay deegaanda Juruud Qalamuun oo 15-kii maalmood ee lasoo dhaafay marti geliyay dagaallo laysku hilboobay.
Dhinaca kale xoogaga islaamiga Xureynta Shaam Ex,Jabhadda Al Nusra ayaa dhankooda sheegay in ay bilaabayaan wadahadallo lala gelayo Ururka Xisbullaah si loo khafiifiyo dagaallada culus ee Al-qalamuun ka socda.
Ragga Firfircoon ee soo tabiya Kacdoonka Suuriya waxay sheegeen in Wakiillada iiraan si xun loogu jabiyay dagaalka Alqalamuun arrinkaasi oo keenay in ay xabad joojin u madax raariciyaan, tobaneeyo maleeshiyaad ah oo maxaabiis ahaan looga qabtay Xisbullaah ayay xoogaga mucaaradka Suuriya baraha internetka kusoo bandhigeen.
Inta badan xoogaga islaamiga Suuriya ayaa wacad ku maray in aysan isku dhiibi doonin maleeshiyaadka shiicada calooshood u shaqeystayaasha ah iyo ciidanka Al-asad waxayna wacad ku mareen in ay sii wadayaan dagaalka iyagoo difaacaya muslimiinta sunniga ah.